Anmol KC (अनमोल केसी) - Bhuwan KC son
Topic: Anmol KC (अनमोल केसी) - Bhuwan KC son
Author Topic: Anmol KC (अनमोल केसी) - Bhuwan KC son (Read 15732 times)
« on: April 01, 2015, 12:37:26 AM »
Happy Birthday Anmol KC
His sister -- Kajal KC --- the name behind Kajal Films
Re: Anmol KC (अनमोल केसी) - Bhuwan KC son
« Reply #1 on: April 22, 2015, 10:29:04 PM »
« Reply #2 on: January 15, 2016, 02:47:26 PM »
Dreams traile release report
Anmol KC मा के छ ? अनमोल केसी
« Reply #3 on: June 15, 2016, 03:22:04 PM »
अनमोलको आकाशिँदो मोलः कति स्वभाविक कति अतिरञ्जित ?
पछिल्लो समय नेपाली चलचित्र उद्योगलाई एक २२ वर्षे ठिटोले हल्लाइदिएका छन् । हालै उनले २० लाख पारिश्रमिकमा एउटा फिल्म साइन गरे ।
जहाँ एउटा औसत फिल्मको बजेट ५०-६० लाख हुन्छ, त्यहाँ एउटा हिरोलाई २० लाख रुपैयाँ दिन निर्माता तयार भएकोमा धेरै आश्चर्यमा परेका छन् । अनमोलको यो ‘भाउ’ स्वभाविक हो कि अतिरञ्जित भन्ने प्रश्न उठेको छ । तर, अनमोलको उपस्थितिले आफ्नो फिल्मको ब्यापारमा कम्तिमा २० लाखको फरक पार्छ भन्नेमा निर्माता विश्वस्त देखिन्छन् ।
निर्माताको यो विश्वासको आधार भनेको अनमोलले एकपछि अर्को गरी राखिरहेको सफलताको रेकर्ड हो । जहाँ अधिकांस फिल्महरुले लगानी उठाउन संघर्ष गर्छन्, अनमोलले लगातार हिट फिल्म दिइरहेका छन् । होस्टेल, जेरी, ड्रिम्स हुँदै गाजलुसम्म आइपुग्दा उनले जबरजस्त रुपमा आफूलाई सुपरस्टार सावित गरेका छन् । केही बर्ष अगाडि राजेश हमाल, निखिल उप्रेती, विराज भट्टको नामले चलचित्र त चल्थ्यो । तर, अनमोलको स्टारडम अर्कै उचाइमा पुगेको छ ।
आखिर अनमोलमा त्यस्तो चिज के छ, जसले उनलाई चार वर्षमै यो उचाईमा पुर्‍यायो ? आउनुस, उनका सवल पक्षबारे चर्चा गरौं ।
१. एक्स्ट्रा लुक्स: अनमोलको अनुहार नै उनको प्रमुख आकर्षण मान्नेहरु धेरै छन् । परम्परागत नेपाली हिरोहरुभन्दा उनको अनुहारको आकृति अलिकति ‘युनिक’ छ । कोरियन जस्तो लाग्ने लुक्सले विशेषत युवतीहरुलाई एकै नजरमा लोभ्याउँछ । त्यसैले अनुहार उनको पहिलो बिकाउ वस्तु हो ।
२. स्टाइलिस व्यक्तित्वः अनमोल फिल्मभित्र जति स्टाइलिस देखिन्छन् बाहिर पनि त्यस्तै छन् । आफु सुहाउँदो ड्रेसअप गर्छन् । सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा जाँदा ड्रेसअपदेखि हेयर स्टाइलसम्ममा निकै ध्यान दिएको पाइन्छ । समग्रमा एउटा सुपरस्टारको छवि उनको व्यक्तित्वमा झल्किन्छ ।
३. स्टारडमः एउटा स्टारका लागि आफ्नो स्टारडम मेन्टेन गर्नु पनि एउटा चुनौति हो । सबैले यो जान्दैनन् र सक्दैनन् । केही समयअघि उनी आफ्नो चलचित्र ड्रिम्स हेर्न हलमा पुग्दा चार जना बडिगार्ड लिएर गए । कुनै पनि नेपाली हिरोले बडिगार्ड लिएर हिँडेको त्यो पहिलोपटक थियो ।
उनी चलचित्रसम्वन्धि सानातिना सबै कार्यक्रममा पुग्दैनन्, खास-खास ठाउँमा मात्रै देखिन्छन् । अन्तरवार्ताहरुमा सन्तुलित भएर बोल्छन् । यी सबै उनको स्टारडमका लक्षण हुन् ।
४. चुजी एक्टरः अनमोलले चार वर्ष लामो फिल्मी करिअरमा केवल चार फिल्म खेले । जबकि पहिलो फिल्म हिट हुनासाथ उनलाई अफरहरुको ओइरो लागेको थियो । फिल्म साइन गर्ने सवालमा उनी एकदमै चुजी देखिए । विगतमा राजेश हमालले जस्तो पाएजति फिल्ममा अभिनय गर्दै हिँडेको भए उनले यतिबेलासम्म दुई दर्जन फिल्म आइसक्थे होला । तर, आजको स्टाटसमा उनी सायदै पुग्थे ।
५. आफ्नो फिल्ममा सिरियसः आफूले खेल्ने फिल्मप्रति अनमोल अत्यन्तै उत्तरदायि देखिन्छन् । आफ्नो भूमिका मात्रै नभएर फिल्मको हरेक पक्षमा ध्यान दिन्छन् । को स्टारदेखि म्युजिकसम्ममा चासो राख्छन् । स्त्रिmप्टमा नै दख्खल दिन पनि पछि पर्दैनन् । कलिलो उमेरमा नै यो स्तरको गम्भीरताले उनी लामो रेसका घोडा हुन् भन्ने संकेत गर्छ ।
अनमोलका दुर्वल पक्ष पनि थुप्रै छन् । तीनको पनि चर्चा गरौं ।
१. अभिनय कमजोरः एउटा अभिनेतामा हुनुपर्ने पहिलो गुण भनेको अभिनय हो । तर, अनमोल अभिनयमा कमजोर रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । चारवटा फिल्मसम्म आइपुग्दा उनको अभिनयमा निखार आउन बाँकी नै रहेको देखिन्छ । धेरै दर्शकलाई उनको डाइलग बोल्ने स्टाइल पनि अलिकति बनावटी लाग्छ ।
२. विविधताको कमिः अहिलेसम्म अनमोलले कुनै पनि यस्तो भूमिका गरेका छैनन्, जसमा उनको अभिनय कलाको परिक्षा होस् । चारवटै फिल्ममा उनको भूमिका लगभग उस्तै-उस्तै नै छ । फलस्वरुप उनको अभिनयमा पनि नयाँपनको अभाव देखिन्छ । अनमोलको आलोचना हुने एउटा पक्ष यो पनि हो । एउटै खालको भूमिकालाई अझै निरन्तरता दिइरहे भने विस्तारै उनका डाइहार्ड फ्यान पनि वाक्क बन्ने छन् । अभिनयको अन्तरालकै कारण बौद्धिक दर्शकले अनमोललाई दयाहाङ राईको छेउछाउ पनि पनि मान्दैनन् ।
३. डान्स जान्दैनन्ः बलिउडमा जस्तै नेपाली चलचित्रमा पनि संगीतलाई अपरिहार्य तत्वका रुपमा समावेश गरिन्छ । संगीतसँग जोडिएर आउँछ नृत्य । अहिलेसम्मका चलचित्र हेर्दा अनमोलको नृत्य कमजोर होइन, दयनीय देखिएको छ । उनका बाबु भुवन केसीको डान्स जिरो थियो, अनमोल पनि अहिलेसम्म बाबुकै पदचिन्हमा छन् । अनमोलको कमजोर डान्सका कारण नै उनका फिल्ममा बढि सफ्ट मेलोडीका गीतहरु राखिन्छ ।
३. सानो घेराः चुजी हुनु अनमोलको सवल पक्ष हो तर अनमोल अहिलेसम्म सानो घेरामा कैद भएको प्रतित हुन्छ । उनले चार वर्षमा चारवटा फिल्ममा अभिनय गरे जसमध्ये तीनवटा फिल्ममा एउटै निर्देशक थिए । बाँकी एउटा फिल्म उनकै पिता भुवन केसीले निर्देशन गरेका थिए । अहिले नेपाली चलचित्र उद्योगमा प्रतिभाशाली निर्देशकहरुको कमि छैन । तर, अनमोलले उनीहरुलाई विश्वास नगरेको प्रतित हुन्छ ।
रेट कति ?
अनमोलको स्टारडम नेपाली चलचित्र उद्योगकै लागि सुखद समाचार हो । नेपाली हिरो भनेपछि नाक खुम्च्याउने र हलिउड-बलिउडका स्टारहरुप्रति क्रेजी हुने युवा जमातले अनमोललाई मन पराएको छ । अनमोलको अबको चुनौति भनेको यो क्रेजलाई निरन्तरता दिनु हो ।
अनमोल अहिले पनि आफ्नो करिअरको प्रारम्भिक चरणमा नै छन् । यतिबेला उनले पैसा होइन, निर्देशक र स्त्रिmप्ट हेरेर फिल्म साइन गर्नुपर्छ । उनले लिएको २० लाख पारिश्रमिक नेपाली चलचित्रको धरातलीय यथार्थसँग मेल खाँदैन । उनले यसैलाई आफ्नो रेट बनाए भने आत्मघाति हुन सक्छ ।
अनमोलले सम्झौता गरेर भए पनि राम्रा निर्देशकहरुसँग फिल्म खेल्नु आवश्यक छ ।
२०७३ असार १ गते १४:०९ मा प्रकाशित (onlinekhabar)
Re: Anmol KC मा के छ ? अनमोल केसी
« Reply #4 on: June 15, 2016, 03:24:07 PM »
अनमोलले किने २२ लाखको डुकाटी स्पोर्टस बाइक
सेतोपाटी, काठमाडौं, जेठ ३१
बलिउडमा जोन अब्राहम, सलमान खान जस्ता स्टारहरू बाइकका सौखिन पनि हुन्। उनीहरूको लोभलाग्दो कमाइले त्यो सोख सजिले पूरा हुन्छ तर नेपाली कलाकारहरूको हकमा लक्जरी बाइक किन्न सजिलो छैन्। उनीहरूको पारिश्रमिकले लाखौं पर्ने बाइक किन्न कठिन नै छ् तर उदाउँदा नेपाली स्टार अमनोल केसीले हालै २२ लाख पर्ने इटालियन डुकाटी बाइक किनेका छन्।
अनमोलले करिब तीन साता अघि कालो रंगको डुकाटी मोनोस्टर ७९६ मोडलको स्पोर्टस बाइक किनेका हुन्। यसअघि उनले यामाहा कम्पनीको फेजर बाइक चलाउँथे। अनमोल स्पोर्टस् बाइकका सौखिन हुन्। लगातार चार हिट दिएका अनमोलले आइतबार मात्र २० लाखमा 'कृ' फिल्ममा अनुबन्धित भएका छन्।
अनमोल नेपाली फिल्ममा पछिल्लो समय फेसभ्यालु भएका स्टारका रूपमा देखा परेका छन्। डुकाटी बाइक किन्ने उनी सम्भवत: पहिले नेपाली अभिनेता हुन्।
« Reply #5 on: March 31, 2017, 12:30:32 PM »
« Reply #6 on: January 15, 2018, 10:49:52 PM »
« Reply #7 on: January 17, 2018, 09:52:30 AM »
anmol kc(4).jpg (54.08 kB, 960x648 - viewed 67 times.)
anmol-and-upasana.jpg (70.23 kB, 700x518 - viewed 62 times.)
« Reply #8 on: February 07, 2018, 10:50:43 AM »
केटीको फिगर बिक्छ, केटाको स्टाइलः अनमोल केसी
चलचित्र ‘कृ’ यही शुक्रबारबाट देशभर एकसाथ प्रदर्शनमा आउँदैछ । रिलिज डेट नजिकिँदै गर्दा यसका हिरो अभिनेता अनमोल केसीको चर्चा झन् चुलिँदो छ । विशेष गरेर युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय अनमोलको चलचित्रबाट धेरैले धेरै थरीका आस गरेका छन् । अनमोललाई आफ्नो मनमा सजाउने युवतीहरू उनको चलचित्र हेरेर उनीसँग नजिकिएको चाहना पूरा गर्ने आसमा छन् भने वितरकहरू यस अगाडिका चलचित्रले बनाएको रेकर्ड ‘कृ’ तोड्ने आसमा छन् । तर अभिनेता अनमोल भने कुनै पनि व्यावसायिक रेकर्ड तोड्ने आफूमा प्रेसर नभएको बताउँछन् । सोमबार राजधानीमा आयोजित चलचित्रको ‘मैले जानी नजानी’ बोलको गीत सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि अनमोलले यही कुरा दोहोर्याएका छन् । उनले आफ्नो प्रतिस्पर्धा कुनै पनि नेपाली चलचित्रसँग नभएको बताउँदै ‘कृ’मा आफूले निर्वाह गरेको दुई थरीकै भूमिका दर्शकले रुचाउने बताउँछन् । ‘उमेर बढेसँगै अभिनयमा पनि आफूले थुप्रै परिवर्तन गरेको बताउने अनमोलसँग गरिएको छोटो कुराकानी :
तपार्इंको पछिल्लो चलचित्र ‘कृ’ शुक्रबारबाट रिलिज हुँदैछ । एक्साइटेट र डरमध्ये के बढी छ ?
– डर बढी छ । किनभने यो चलचित्रको एक्स्पेक्टेसन धेरै छ । दुई वर्षपछि मेरो चलचित्र प्रदर्शनमा आउँदैछ । म चलचित्र प्रदर्शनको कुरालाई लिएर धेरै एक्साइटेट छु भने डर पनि धेरै छ । मलाई मेरा फ्यान दर्शकले चलचित्र रुचाउनु हुन्छ भन्ने विस्वास छ ।
चलचित्रमा विषय के छ, जसको कारणले यो चलचित्र छुटाउन मिल्दैन ?
–‘कृ’बाट अभिनयमा पनि मैले केही फरक पन दिन खोजेको छु । मेरो चलचित्र रोमान्स दर्शकले पाहिला पनि हेर्नुभएको हो । यसमा भने एक्सन अवतारसमेत प्रस्तुत भएको छु । दर्शकका लागि यो नौलो स्वाद हुनसक्छ ।
चलचित्रका केही गीत रिलिज भएका छन् । गीतले पाएको दर्शक प्रतिक्रियाबाट सन्तुष्ट लिने ठाउँ छ कि छैन ?
– सन्तुष्ट छु । दर्शकले राम्रो प्रतिक्रिया दिइरहनुभएको छ । आज गीत परिलिजमा केही टेक्निकल प्रोब्लम आयो । त्यो सुधारिएर आउने छ । निर्माणका रूपमा भन्नुपर्दा अपेक्षा गरेअनुसार आएको छ । मेरो विचारमा राम्रो गीत सङ्गीत राखेर ‘कृ’ जस्तो चलचित्र बन्नु भनेको नेपाली चलचित्र उद्योगले गर्व गर्नुपर्ने कुरो हो ।
अनमोललाई अहिले मेघा स्टार भन्ने गरिएको छ । ‘कृ’ चलचित्रले त्यो स्थानमा पुर्याउँछ त ?
–मलाई विभिन्न स्टारको संज्ञा दर्शक, चलचित्रले दिएका होइन । मिडियाले बनाइ दिनुभएको हो । मिडियाले मलाई अहिलेसम्म जसरी साथ र सापोर्ट दिनुभएको छ । त्यसरी नै आगामी दिनमा दिए पुग्छ । चलचित्र ‘कृ’ले अभिनेताका रूपमा मलाई अझ अगाडि बढाउँछ ।
तपाईंका कारणले चलचित्र प्रदर्शनमा आउनु एक साता पहिले विदेशमा गएर गीत छायाङ्कन गरिएयो भन्ने छ नि ?
–यो गीत विदेशमा खिच्ने युनिटको पहिलेदेखिकै प्लानिङ थियो । तर चलचित्रको काम सेडुलअनुसार नभएकाले रिलिजको सँघारमा हतार हतार गरेर गीत छायाङ्कन गर्नुपरेको हो ।
‘छक्का पन्जा’ले बनाएको रेकर्ड अब अनमोलको चलचित्रले मात्र तोड्छ भन्ने चर्चा बजारमा छ । तपाईंलाई के लाग्छ ?
– मेरो तुलना नेपाली चलचित्रको कुनै पक्षसँग पनि गर्न मन लाग्दैन । यो क्षेत्रमा जति पनि छन् ती सबै मभन्दा सिनियर छन् । ‘छक्का पन्जा’ टिमको कुरा गर्दा पनि चलचित्रमा जति कलाकार छन् । ती सबै अभिनय क्षेत्रमा मभन्दा सिनियर हुन् । त्यसैले नेपाली चलचित्रभन्दा पनि नेपाली दर्शकलाई हिन्दीबाट छुटाएर नेपाली चलचित्र हेर्ने बनाउनु आजको चुनौती हो भन्ने मैले बुझेको छु । त्यसैले छक्का पन्जाको रेकर्ड मैले तोड्नु पर्छ भन्ने लागेको छैन ।
आज रिलिज गरिएको गीत जाडो ठाउँमा खिचिएको छ । अभिनय समयमा कतिको गाह्रो महसुस भयो ?
–उक्त स्थानमा गीत छायाङ्कन गर्दा जाडो मलाई मात्र होइन, सबैलाई भएको थियो । तर अभिनेत्री अदीतिका कारणले हामीले जाडो महसुस गरिरहेका थिएनौँ । किनभने उनी हल्काफुल्का ड्रेसमा पनि अभिनय गरिरहेकी थिइन् । विचरा उनी त गरिरहेकी छन् । मैले त धेरै लुगा लगाएको छु । केको जाडो भन्ने फिलिङ हुन्थ्यो । गीतमा स्टाइलिस देखाउनु पर्ने भएकाले कोट लगाएको थिए । हिरोले फिगर देखाउनुपर्ने भए गाह्रो हुन्थ्यो होला । सोबिज नै यस्तै छ । केटीहरूको फिगर बिग्छ भने केटाहरूको स्टाइल बिग्छ ।
‘कृ’मा तपाईंसँग रोमान्स गरेकी अदीति स्टाग्रामकी पनि क्विन हुन् । तपाईंलाई चाहिँ कुन अदीति मनपर्छ ?
–अदीति त अदीति हुन् । उनको जुनै रूप पनि राम्रो लाग्छ ?
अक्षय कुमारको ‘प्याड म्यान’सँग ‘कृ’ भिड्दै छ । अक्षयको फ्यान पनि नेपालमा धेरै छन् । चलचित्रको व्यवसाय के हुने हो भनेर डर लागेको छैन ?
–अहिलेको समयमा आएर त्यसले केही फरक पार्दैन । यो वर्षको कुरा गर्ने हो भने बलिउडका चलचित्रसँग जति नेपाली चलचित्र जुदेका छन् ती सबै चलचित्रले राम्रो व्यवसाय गरेका छन् । पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रलाई दर्शकले माया गर्दिनुभएको छ । दर्शकको चाहनाअनुसार पनि चलचित्र बनिरहेको छ । त्यसैले केही डर त छ तर दर्शकले हामीलाई सपोर्ट गर्नु हुन्छ भन्ने लागेको छ ।
तपाईंका दर्शक मल्टिप्लेक्समा बढी छन् नि सिङ्गल थिएटरमा ?
– पहिलेको सन्दर्भमा भन्ने हो भने मल्टिप्लेक्स नै हो । तर अहिले सिङ्गल थिएटरमा पनि मलाई खोजिन्छ । चलचित्रको ‘यति यति पानी’ गीतले पाएको दर्शकबाट पनि सो अनुमान लगाउन सकिन्छ । मैले पनि कमर्सियल मात्र नभएर सबै दर्शकलाई समेट्ने प्रयास यो चलचित्रबाट गरेको छु ।
चलचित्रले कति कलेक्सन गर्छ, अनुमान गर्न सक्नु हुन्छ ?
– व्यवसायतिर मेरो ध्यान छैन । किनभने म निर्माता होइन । निर्माता भएको भए मेरो त्यतातिर ध्यान जान्थ्यो होला । मेरो त्यान चलचित्र रिलिज भएपछि दर्शकले मेरो अभिनयको बारेमा कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन् । दर्शकले अभिनय रुचाउँछन् कि रुचाउँदैनन् भन्नेतिर रहन्छ ।
‘ड्रिम्स’बाट अभिनयमा डेब्यु गर्ने अभिनेत्री साम्राज्ञीको अहिले ट्याटु सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । यसलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?
–म विदेशमा थिएँ, त्यससम्बन्धी केही थाहा छैन ।
« Reply #9 on: February 07, 2018, 10:53:07 AM »